प्रेषितहरूका कार्य १६:१-४०
पावल तिमोथिलाई छान्छन्‌ (१-५)
म्यासिडोनियाली पुरुषको दर्शन (६-१०)
फिलिप्पिमा लिडिया चेला बन्छिन्‌ (११-१५)
पावल र सिलासलाई झ्यालखानामा हालिन्छ (१६-२४)
जेलर र तिनको घरानाले बप्तिस्मा गर्छन्‌ (२५-३४)
पावल प्रशासकहरूले माफी मागेको चाहन्छन्‌ (३५-४०)
१६ तब पावल यात्रा गर्दै डर्बि र लिस्त्रामा पनि आइपुगे।+ त्यहाँ तिमोथि+ नाम गरेका एक जना चेला थिए। उनकी आमा प्रभुमा विश्‍वास गर्ने यहुदी स्त्री थिइन्‌ तर उनका बुबा भने ग्रीक थिए। २ लिस्त्रा र आइकोनियमका भाइहरूले उनको असाध्यै तारिफ गर्थे। ३ पावलले तिमोथिलाई आफूसँगै लैजाने इच्छा व्यक्‍त गरे। ती ठाउँहरूमा भएका यहुदीहरूको कारण पावलले उनलाई आफूसँगै लगेर खतना गराए+ किनकि उनका बुबा ग्रीक हुन्‌ भनेर सबैलाई थाह थियो। ४ तिनीहरू जुन-जुन सहर जान्थे, त्यहाँ-त्यहाँ यरुसलेमका प्रेषित र एल्डरहरूले गरेको फैसला सुनाएर ती पालन गर्नू भनी बताउँथे।+ ५ अनि मण्डलीमा हुनेहरूको विश्‍वास बलियो हुँदै जानुका साथै उनीहरूको सङ्‌ख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्‌दै गयो। ६ त्यसपछि तिनीहरू फ्रिजिया र गलातियाको इलाका हुँदै गए+ किनकि पवित्र शक्‍तिले तिनीहरूलाई एसिया प्रान्तमा परमेश्‍वरको वचन प्रचार गर्न निषेध गरेको थियो। ७ अनि माइसिया झरेपछि तिनीहरूले बिथिनिया+ जाने प्रयास गरे तर येसुले पवित्र शक्‍तिद्वारा तिनीहरूलाई त्यहाँ जाने अनुमति दिनुभएन। ८ त्यसैले तिनीहरू माइसिया हुँदै त्रोआस आइपुगे। ९ अनि राती पावलले एउटा दर्शन* देखे—एक जना म्यासिडोनियाली पुरुष खडा भएर तिनलाई यस्तो बिन्ती गरिरहेका थिए: “म्यासिडोनिया आउनुहोस्‌ र हामीलाई मदत गर्नुहोस्‌।” १० पावलले दर्शन देख्नेबित्तिकै हामी म्यासिडोनियातिर लाग्यौँ किनकि उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउन परमेश्‍वरले हामीलाई बोलाउनुभएको हो भन्‍ने निष्कर्षमा हामी पुगेका थियौँ। ११ त्यसैले हामी त्रोआसबाट जहाज चढेर बीचमा कतै नरोकी सीधै सामोथ्रेस गयौँ र भोलिपल्ट नियापोलिस आइपुग्यौँ। १२ अनि त्यहाँबाट फिलिप्पि+ गयौँ। यो रोमी उपनिवेश हो र म्यासिडोनिया प्रान्तको प्रमुख सहर पनि हो। हामीले यहाँ केही दिन बितायौँ। १३ विश्रामदिनमा* हामी सहरको ढोकाबाहिर निस्केर नदीको किनारामा गयौँ किनकि त्यहाँ प्रार्थना गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ भनी हामीले अनुमान लगाएका थियौँ। हामी त्यहीँ बस्यौँ र त्यहाँ भेला भएका स्त्रीहरूसित कुरा गर्न थाल्यौँ। १४ थिआटिरा+ सहरकी लिडिया नाम गरेकी एउटी स्त्रीले हाम्रो कुरा सुनिरहेकी थिइन्‌। उनी बैजनी वस्त्रको* व्यापारी थिइन्‌ र परमेश्‍वरको उपासना गर्थिन्‌। पावलले भनिरहेका कुराहरू उनले ध्यान दिएर सुनून्‌ भनेर यहोवा* परमेश्‍वरले उनको हृदय खोलिदिनुभयो। १५ उनी र उनको घरमा हुने सबैको बप्तिस्मा भएपछि+ उनले हामीलाई यसरी बिन्ती गरिन्‌: “यदि तपाईँहरू म यहोवा* परमेश्‍वरप्रति वफादार छु भनी सम्झनुहुन्छ भने कृपया मेरो घरमा आएर बस्नुहोस्‌।” उनले कर गरेर हामीलाई आफ्नो घर लगिछाडिन्‌। १६ एक चोटि प्रार्थना गर्ने ठाउँतिर गइरहेको बेला एउटी नोकर्नीसित हाम्रो भेट भयो। उसमा भविष्य बताउने प्रेत* बास गरेको+ थियो र उसले जोखना हेरेर आफ्ना मालिकहरूको निम्ति निकै कमाइ गर्ने गर्थी। १७ पावल र हाम्रो पछिपछि लागेर त्यो केटी यसो भन्दै चिच्याइरही: “यी मानिसहरू सर्वोच्च परमेश्‍वरका दास हुन्‌+ र यिनीहरूले तिमीहरूलाई उद्धारको मार्गको सन्देश घोषणा गरिरहेका छन्‌।” १८ उसले धेरै दिनसम्म त्यसै गरिरही। अन्तमा वाक्क भएर पावलले फनक्क फर्कँदै त्यस प्रेतलाई भने: “येसु ख्रिष्टको नाममा म तँलाई आज्ञा गर्छु, त्यसबाट निस्किहाल्‌।” अनि उत्तिखेरै त्यो प्रेत उसबाट निस्किहाल्यो।+ १९ अब आफ्नो कमाइ गर्ने बाटो बन्द भएको देखेपछि+ उसका मालिकहरूले पावल र सिलासलाई पक्रेर घिसार्दै बजारमा शासकहरूकहाँ पुऱ्‍याए।+ २० अनि उनीहरूले तिनीहरूलाई नगर अधिकारीहरूकहाँ लगेर भने: “यी मानिसहरू यहुदी हुन्‌ र यिनीहरूले हाम्रो सहरमा ठूलो खैलाबैला मच्चाइरहेका छन्‌+ २१ अनि हामी रोमीहरूले स्विकार्न वा पालन गर्न उचित नहुने रीतिथिति सिकाइरहेका छन्‌।” २२ तब भीड तिनीहरूमाथि जाइलाग्यो; त्यसपछि नगर अधिकारीहरूले तिनीहरूको लुगा च्यातिदिए र तिनीहरूलाई छडी लगाउने हुकुम गरे।+ २३ अनि पिट्‌नुसम्म पिटिसकेपछि तिनीहरूलाई झ्यालखानामा जाकिदिए र कडा सुरक्षाका साथ तिनीहरूको निगरानी गर्नू भनी जेलरलाई आदेश दिए।+ २४ आफूले यस्तो आदेश पाएको हुँदा जेलरले तिनीहरूलाई झ्यालखानाको सबैभन्दा भित्रको खोरमा लगेर थुने अनि तिनीहरूको खुट्टा ठिँगुरोमा हालिदिए। २५ तर मध्यराततिर पावल र सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्‍वरको स्तुतिगान गाइरहेका थिए+ र अरू कैदीले पनि सुनिरहेका थिए। २६ तब अचानक ठूलो भूकम्प गयो र झ्यालखानाको जग हल्लियो। यति मात्र होइन, एकाएक सबै ढोका खुले अनि सबै कैदीका बन्धन फुस्किए।+ २७ निद्राबाट झसङ्‌ग ब्युँझिएका जेलरले झ्यालखानाका ढोकाहरू खुल्लै देखेपछि सबै कैदी भागिसके होलान्‌ भन्ठाने।+ त्यसैले उनले आफ्नो तरबार थुतेर आत्महत्या गर्ने सुर कसे। २८ तर पावलले ठूलो स्वरले कराउँदै भने: “आफूलाई केही नगर्नुहोस्‌, हामी सबै जना यहीँ छौँ!” २९ तब उनी बत्ती मागेर हतारिँदै भित्र आए अनि थरथर काम्दै पावल र सिलासको अगाडि घोप्टो परे। ३० अनि तिनीहरूलाई बाहिर ल्याएर उनले भने: “हजुर, उद्धार पाउन मैले के गर्नुपर्छ?” ३१ तिनीहरूले जवाफ दिए: “प्रभु येसुमा विश्‍वास गर्नुहोस्‌ अनि तपाईँ र तपाईँको घरानाको उद्धार हुनेछ।”+ ३२ अनि तिनीहरूले उनलाई र उनको घरमा हुनेहरू सबैलाई यहोवा* परमेश्‍वरको वचन सुनाए। ३३ उनले तिनीहरूलाई राती नै लगेर तिनीहरूको घाउ सफा गरिदिए। त्यसपछि उनले र उनको घरमा हुनेजति सबैले तुरुन्तै बप्तिस्मा गरे।+ ३४ उनले तिनीहरूलाई आफ्नो घरमा लगेर खाना खुवाए अनि आफूले परमेश्‍वरमाथि विश्‍वास गर्न पाएकोमा आफ्नो सारा घरपरिवारसँगै अत्यन्तै रमाए। ३५ उज्यालो भएपछि नगर अधिकारीहरूले आफ्ना अङ्‌गरक्षकहरूलाई यसो भन्‍न पठाए: “ती मानिसहरूलाई छोडिदिनू।” ३६ जेलरले उनीहरूको सन्देश सुनाउँदै पावललाई यसो भने: “तपाईँहरू दुई जनालाई छोडिदिनू भन्‍ने खबर दिन नगर अधिकारीहरूले आफ्ना मानिसहरू पठाएका छन्‌। त्यसैले बाहिर निस्कनुहोस्‌ र शान्तिपूर्वक आफ्नो बाटो लाग्नुहोस्‌।” ३७ तर पावलले उनीहरूलाई भने: “हामी रोमी नागरिक+ भए पनि तिनीहरूले हामीलाई दोषी नठहराईकनै* खुलमखुला पिटे र झ्यालखानामा हालिदिए। के अहिलेचाहिँ हामीलाई सुटुक्क निकाल्न खोज्दै छन्‌? अहँ, हामी त्यसरी जाँदैनौँ! उनीहरू आफै आएर हामीलाई बाहिर निकालून्‌।” ३८ ती अङ्‌गरक्षकहरूले नगर अधिकारीहरूलाई यो कुरा सुनाइदिए। अनि यिनीहरू त रोमी नागरिक पो रहेछन्‌ भन्‍ने सुनेर उनीहरू डराए।+ ३९ त्यसैले उनीहरू आएर तिनीहरूलाई मनाउन खोजे। अनि तिनीहरूलाई बाहिर ल्याएपछि सहर छोडेर जान आग्रह गरे। ४० तर झ्यालखानाबाट बाहिर निस्केर तिनीहरू लिडियाको घर गए। भाइहरूलाई देखेपछि तिनीहरूले उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिए+ अनि आफ्नो बाटो लागे।
^ वा “बैजनी रङ्‌गको।”